Madaxda Dowlad Goboleedyada oo kulan gaar ah yeelanaya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Madaxda Dowlad Goboleedyada oo kulan gaar ah yeelanaya
Wada-hadallo dhinaca qadka taleefoonka ah ayay wada yeesheen Madaxda Dowlad Goboleedyada, Puntland, Galmudug, Hir-Shabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, iyaga oo isku raacay inay dhawaan yeeshaan kulan wadatashi gaar ah.
Xogaha laga helay ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxda Dowlad Goboleedyada ay ku heshiiyeen in shir ku yeeshaan 8-da Bishaan Magaalada Dhuusaamareeb ee Caasimada Galmudug,kaas oo uu martigelinayo Maamulka Galmudug.
Kulanka ayaa waxaa ay uga hadli doonaan sida ugu fudud ee xal looga gaari karo khilaafka u dhaxeeya Madaxda dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyad qaar iyo sida ay uga wada hadli lahaayeen Arrimaha doorashooyinka iyo Amniga dalka.
Kulanka oo socon doona maalmo kooban ayaa waxaa geba-gabadiisa la filayaa in War-murtiyeed kasoo saaraan kulanka dhex maray Madaxda Shanta Dowlad goboleed ee kajira dalka.
Kulankaan gaar ah oo ay yeelanayaan Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa ka dambeysay kaddib markii uu fashilmay kulankii Madaxweyne Farmaajo uu isugu yeeray Maamul goboleedyada, kaasoo Muqdisho ka dhici lahaa 5-8 bishan July, kaddib markii ay qaadaceen Maamul Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Previous articleKoonfur Galbeed oo Shaqada u fasaxday Guddoomiye Degmo
Next articleDhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 06-07-2020